ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြည့်စွက်ထားသောအရောင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်အရောင်ခြယ်သည့်အစီအစဉ်များကိုလိုအပ်သည် ... ၎င်းကိုသင်လုပ်နိုင်သည့်နေရာ Martech Zone
အရောင်နှစ်မျိုး (သို့) နှစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လိုဖြည့်ပေးတယ်ဆိုတာနောက်ကွယ်မှာဇီဝသိပ္ပံဆိုတာတကယ်ရှိတာသိလား။ ကျွန်ုပ်သည်မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီးမဟုတ်သလိုမျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသောလူများအတွက်ဤသိပ္ပံကိုဘာသာပြန်ရန်ကြိုးစားပါမည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အရောင်နဲ့စတင်ကြပါစို့။
အရောင်များသည် Frequency များဖြစ်သည်
ပန်းသီးတစ်လုံးဟာနီတယ်၊ မဟုတ်ပါ။ ပန်းသီးတစ်လုံး၏မျက်နှာပြင်မှအလင်းကိုမည်သို့ထင်ဟပ်ပြီးပြန်လည်တုန့်ပြန်သည်ကိုကြိမ်ဖန်များစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၄ င်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိဖြင့်အချက်ပြအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး ဦး နှောက်သို့ပို့သည်။ ဟုတ်ပြီ ... ဒါကငါ့ရဲ့ခေါင်းကိုနာကျင်နေတယ်။ ဒါအမှန်ပဲ ... အရောင် အလင်း၏ကြိမ်နှုန်းသာဖြစ်သည်။ ဤတွင်လျှပ်စစ်သံလိုက်ရောင်စဉ်နှင့်အရောင်များ၏ကြိမ်နှုန်းကိုကြည့်ပါ။
ဤသည်အတိအကျအဘယ်ကြောင့်အဖြူရောင်အလင်းတစ် prism ကိုညွှန်ပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်သက်တံ့ထုတ်လုပ်သည်။ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားနေသောအရာသည်အလင်းသည်အလင်းပြန်စဉ်တွင်လှိုင်းအလျား၏ကြိမ်နှုန်းကိုပြောင်းလဲနေသည်။
ကြည်လင်သော Prism သည်အဖြူရောင်အလင်းကိုအရောင်များစွာသို့ဖြန့်သည်။
သင်၏မျက်လုံးသည်အမှန်တကယ်လျှပ်စစ်သံလိုက်ရောင်စဉ်ရှိအရောင်လှိုင်းများအတွက်ကြိမ်နှုန်းရှာဖွေစက်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ သင်၏အရောင်များကိုစစ်ဆေးနိုင်စွမ်းသည်သင်၏မျက်လုံးနံရံရှိအခြားမျက်လုံးအာရုံကြောများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောမတူညီသောပုံတစ်မျိုးမျိုးမှတစ်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်သည်။ အကြိမ်ရေအကွာအဝေးတစ်ခုစီကိုဤအချို့သောကန့်များမှရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်သင့် ဦး နှောက်ဆီသို့ပို့လွှတ်လိုက်ပြီးသင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ဆီသို့ပို့လိုက်သည်။
တကယ့်ကိုမြင့်မားတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အရာတစ်ခုခုကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာစိုက်ကြည့်နိုင်၊ ကြည့်ပြီးကြည့်ပြီးသင်ကြည့်လိုက်တဲ့မူရင်းအရောင်တွေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့နောက်ပုံကိုဆက်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတာသတိပြုမိသလား။ ၎င်းသည်အဖြူရောင်နံရံပေါ်တွင်အပြာစတုရန်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုပါစို့။
ခဏကြာပြီးနောက်သင့်မျက်လုံးရှိအပြာရောင်အလင်းကိုလည်ပတ်စေသောဆဲလ်များသည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာပြီးသင့် ဦး နှောက်ဆီသို့သူတို့ပို့လိုက်သော signal ကိုအနည်းငယ်အားနည်းစေလိမ့်မည်။ အမြင်အာရုံရောင်စဉ်၏ထိုအပိုင်းကိုအနည်းငယ်ဖိနှိပ်ထားသဖြင့်အပြာစတုရန်းကိုကြည့်ပြီးနောက်အဖြူရောင်နံရံကိုကြည့်လိုက်သောအခါလိမ္မော်ရောင်အရောင်ဆိုးလာသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ မင်းမြင်နေရတဲ့အရာကနံရံကနေအဖြူရောင်ရောင်စဉ်ရောင်ခြည်ရောင်ခြည်လေးပါ၊ မင်း ဦး နှောက်ကလိမ္မော်ရောင်လိုလည်ပတ်နေတယ်။
အရောင်သီအိုရီ 101: သင်တို့အတွက်ဖြည့်စွက်အရောင်များကိုအလုပ်လုပ်ခြင်း
အကယ်၍ ထိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမဖြစ်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိနှင့် ဦး နှောက်များသည်မြင်နေရသည့်လှိုင်းအလျား (ဥပမာ - အရောင်များ) ကိုအနက်ဖွင့်ရန်ခက်ခဲသောအလုပ်ကိုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
သဟဇာတဆန့်ကျင် Visual ဆူညံသံ
အသံနဲ့အရောင်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင်။ အကယ်၍ သင်သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မဖြည့်ဆည်းပေးသောမတူညီသောကြိမ်နှုန်းနှင့်အသံပမာဏကိုသင်နားထောင်ပါက၎င်းကိုသင်စဉ်းစားလိမ့်မည် ဆူညံသံ။ ၎င်းသည်အရောင်နှင့်မတူဘဲ၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသည့်တောက်ပမှု၊ ဆန့်ကျင်ဘက်နှင့်အရောင်များရှိနိုင်သည် အမြင်အာရုံ ဆူညံသို့မဟုတ်ဖြည့်စွတ်။ မည်သည့်ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းအတွင်းမဆိုကျွန်ုပ်တို့သည်သဟဇာတဖြစ်မှုကို ဦး တည်လိုသည်။
တောက်ပသောအနီရောင်ရှပ်အင်္ကျီ ၀ တ်ထားသည့်ရုပ်ရှင်၏နောက်ခံတွင်အပိုတစ်ခုကိုသင်မမြင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်အတွင်းပိုင်းအလှဆင်သူများကသူတို့ဒီဇိုင်းလုပ်သည့်အခန်းနံရံများ၊ ပရိဘောဂများ၊ အနုပညာနှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များအကြားဖြည့်စွက်အရောင်များကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားကြသည်။ အရောင်ကိုအနက်ဖွင့်ရန် ဦး နှောက်အတွက်မည်မျှလွယ်ကူသည်ကို အခြေခံ၍ လာရောက်လည်ပတ်သည့် into ည့်သည်၏စိတ်ထဲတွင်အရောင်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
သင့်ရဲ့ အရောင် palette လှပသောသဟဇာတအတွက်တီးဝိုင်းတပ်ဆင်၏ညီမျှသည်။ အသံနှင့်ကိရိယာများနီးကပ်စွာစုစည်းထားသကဲ့သို့ volume နှင့်ကြိမ်နှုန်းလည်းပါ ၀ င်သကဲ့သို့သင်၏အရောင်များကိုဖြည့်စွက်အရောင်များလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ Color palette ဒီဇိုင်းသည်အနုပညာပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပြီးသူတို့၏အရောင်များကိုတိကျစွာညှိပြီးသောကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်လုံးဝတွက်ချက်မှုဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။
မကြာမီသဟဇာတဖြစ်မှုအကြောင်းပိုမို ... ရဲ့အရောင်သီအိုရီကိုပြန်လည်ရကြကုန်အံ့။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ရောင်စဉ်အတွင်းရှိ Pixel များသည်အနီရောင်၊ အစိမ်းနှင့်အပြာပေါင်းစပ်မှုများဖြစ်သည်။ အနီရောင် = 0၊ အစိမ်း = 0၊ အပြာ =0ကိုပြသထားတယ် အဖြူ နှင့်အနီရောင် = 255, အစိမ်း = 255, နှင့်အပြာ = 255 အဖြစ်ရှုမြင်သည် အနက်ရောင်။ အကြားအရာအားလုံးကွဲပြားခြားနားသောအရောင်သုံးခုရေးစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြည့်စွက်အရောင်ကိုတွက်ချက်ရန်အလွန်အခြေခံသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ RGB Value အသစ်အတွက် RGB တန်ဖိုး 255 မှနုတ်ပါ။ ဥပမာတစ်ခုကြည့်ပါ။
RGB (၂၂၉၊ ၄၃၊ ၈၀)
လိမ္မော်နှင့်အပြာအကြားရှိအလင်း၏ကြိမ်နှုန်းကွာခြားချက်သည်အလွန်ကွာခြားသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မျက်စိအတွက်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ရန်မလွယ်ကူသေးပါ။ အရောင်လှိုင်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ခံသူများအတွက်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်သည်!
အရောင်တစ်မျိုးတည်းကိုတွက်ချက်ရန်လွယ်ကူသည်။ ဖြည့်စွက်ထားသောအရောင် ၃ ခု (သို့) ထိုထက်ပိုသောကွန်ပျူတာများအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုစီအကြားညီမျှသောပမာဏကိုတွက်ချက်ရန်လိုအပ်သည်။ အဲဒါကြောင့် အရောင် palette အစီအစဉ်မီးစက် ဒါနေရာလေးကိုလာ! တွက်ချက်မှုအနည်းငယ်သာလိုအပ်သောကြောင့်ဤကိရိယာများသည်သင့်အားတစ်ခုနှင့်တစ်ခုဖြည့်စွက်သည့်အရောင်များစွာကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။
အရောင်များကြားဆက်နွယ်မှုကိုနားလည်ခြင်းသည်အရောင်ဘီးကို သုံး၍ အကောင်းဆုံးမြင်နိုင်သည်။ အရောင်များကိုသူတို့နှိုင်းယှဉ်ကြိမ်နှုန်းမဟုတ်ဘဲအခြေခံပြီးစက်ဝိုင်းထဲမှာစီစဉ်ပေးထားပါသည်။ radial အကွာအဝေးသည်အရောင်နှင့်အရောင်၏အရောင်အဖြစ်စက်ဝိုင်းပေါ် azimuthal အနေအထားအရောင်နှင့်ပြည့်နှက်သည်။
ပျော်စရာတကယ်တော့: ဆာအိုင်းဇက်နယူတန်သည် ၁၆၆၅ ခုနှစ်တွင်အရောင်ဘီးကိုစတင်တီထွင်ခဲ့သည်။ သူ၏စမ်းသပ်မှုများကအနီရောင်၊ အဝါနှင့်အပြာတို့သည်အခြားသောအရောင်များအားလုံးမှဆင်းသက်လာသည့်အဓိကအရောင်များဖြစ်သည်ဟူသောသီအိုရီကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဘေးထွက်မှတ်စု…သူသည်အရောင်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ဂီတ“ မှတ်စုများ” ကိုပင်အသုံးချခဲ့သည်။
သဟဇာတနှင့်ငါ့ကို arm ...
အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှုနှင့်ဖြည့်စွက်အရောင်များကိုမည်သို့တွက်ချက်သည်ကိုမည်သို့သိသနည်း သဟဇာတ။ ဤတွင်အလွန်ကြီးစွာသောခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဗီဒီယိုကို:
အလားတူ - အရောင်ဘီးပေါ်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားဘေးမှာဖြစ်ကြောင်းအရောင်အုပ်စုများ။
Monochromatic - အုပ်စုများသည်အောက်ခံအရောင်တစ်ခုမှဆင်းသက်လာပြီး၎င်း၏အရိပ်များ၊ တန်ချိန်များနှင့်တင့်များကို အသုံးပြု၍ တိုးချဲ့သည်။
Triad - ပတ်ပတ်လည်၌အညီအမျှအကွာအဝေးဖြစ်ကြောင်းအရောင်အုပ်စုများ အရောင် ဘီး
complementary - အရောင်ဘီးပေါ်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကြောင်းအရောင်အုပ်စုများ။
Split ကိုဖြည့်စွက် - ထိုအဖြည့်နှင့်ကပ်လျက်အရောင်နှစ်မျိုးကိုအသုံးပြုဘယ်မှာဖြည့်စွတ်တစ်မူကွဲ။
စတုဂံ (Tetradic) - အရောင် (၄) ခုကိုပေါင်းစပ်ထားသောအတွဲ (၂) ခုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်
ရင်ပြင် - စတုဂံပုံနှင့်ဆင်တူသော်လည်းအရောင်လေးမျိုးစလုံးနှင့်အရောင်စက်ဝိုင်းပတ်လည်တွင်ညီမျှစွာအကွာအဝေးရှိသည်
compound - အရောင်နှင့်၎င်း၏ဖြည့်စွက်အရောင်ကပ်လျက်နှစ်ခုအရောင်များ
အရိပ် - အဓိကအရောင်အတွက်တင့်ခြင်း (အလင်းတိုးခြင်း) သို့မဟုတ်အရိပ် (မှောင်မိုက်) ၏ညှိနှိုင်းမှု။
အရောင် Palette အစီအစဉ်မီးစက်
အရောင် palette အစီအစဉ်မီးစက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်သည်ဤကဲ့သို့သောလှပပြီးဖြည့်စွက်အရောင်ပေါင်းစပ်မှုကိုရရှိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် client site များတွင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်အရောင်ဖျော့ဖျော့အစီအစဉ်မီးစက်များကိုမကြာခဏအသုံးပြုသည်။ ငါအရောင်များကိုကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်သောကြောင့်ဤကိရိယာများကကျွန်ုပ်သည်နောက်ခံများ၊ နယ်နမိတ်များ၊ အောက်ခြေနောက်ခံများ၊ မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းခလုတ်များကဲ့သို့သောအရာများကိုပိုမိုရွေးချယ်ရန်ကူညီသည်။ ရလဒ်ကတော့ပိုပြီးနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုပါ။ သင်၏ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကြော်ငြာမှ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုလုံးအထိအသုံးချရန်သိမ်မွေ့။ မယုံနိုင်လောက်အောင်အစွမ်းထက်သောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီမှာအွန်လိုင်းမှာအရောင်များသော palette အစီအစဉ်မီးစက်အချို့ကိုတွေ့ရပါတယ်။
Adobe က - အရောင် ၅ ရောင်အထိထူးခြားသည့်သင်တီထွင်မှုအမျိုးမျိုးကိုစမ်းသပ်နိုင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပြီးသင့်အခင်းအကျင်းကိုမည်သည့် Adobe ထုတ်ကုန်တွင်မဆိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
အမှတ်တံဆိပ် - တရားဝင်အမှတ်တံဆိပ်အရောင်ကုတ်နံပါတ်များကိုအများဆုံးစုဆောင်းခြင်း။
ပိုက်ဆံချည်ထည်ပိတ် - ဓာတ်ပုံတစ်ခု တင်၍ သူတို့သည်သင်၏ palette အတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
Colllor - ကလစ်အနည်းငယ်နှိပ်ရုံဖြင့်တသမတ်တည်းသော web color palette ကိုထုတ်လုပ်ပါ။
အရောင်ဒီဇိုင်းနာ - အရောင်ရွေးရုံသို့မဟုတ်ရွေးချယ်ထားသည့်အရောင်များကိုသာအသုံးပြုပါ။
အရောင် Hunt - ထောင်နှင့်ချီသောခေတ်မှီလက်ရွေးထားသောအရောင်ခြယ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူအရောင်လှုံ့ဆော်မှုအတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့်ပလက်ဖောင်း
အရောင် - Instagram ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်အရောင်အသွေးစုံလင်အောင်ပြုလုပ်ရန်။
Colormind - နက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှုကိုအသုံးပြုသည့်အရောင်အစီအစဉ်မီးစက်။ ၎င်းသည်ဓာတ်ပုံများ၊ ရုပ်ရှင်များနှင့်လူကြိုက်များသောအနုပညာမှအရောင်စတိုင်များကိုသင်ယူနိုင်သည်။
Colorspace - အရောင်တစ်ရောင်မှသုံးခုအထိထည့်ပြီးအချို့သောအစီအစဉ်များကိုထုတ်လုပ်ပါ။
Colourcode - ဘယ်ဘက်တွင်သဟဇာတဖြစ်စေသောစတိုင်များဖြင့်သင်၏အရောင်များကိုဖန်တီးရန်အလွန်ကြည်လင်ပြတ်သားသောမျက်နှာပြင်အကျယ်အတွေ့အကြုံ။
ရောင်စုံ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှလူများသည်အရောင်များ၊ ပန်းချီများနှင့်ပုံစံများကိုဖန်တီးမျှဝေခြင်း၊ နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ရောင်စုံဆောင်းပါးများကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းများပြုလုပ်သောဖန်တီးမှုအသိုင်းအဝိုင်း။
coolers - ပြီးပြည့်စုံသော palette ကိုဖန်တီးပါ။ သို့မဟုတ်ထောင်ပေါင်းများစွာသောလှပသောအရောင်များဖြင့်လှုံ့ဆော်ခံရသည်။
ဒေတာများကိုအရောင်ရွေးချယ်သောသူ - အရောင်များကိုဖန်တီးရန် palette ရွေးချယ်သူကိုအသုံးပြုပါ အမြင်အာရုံ equidistant.
ခရိုမာ - မည်သည့်အရောင်များကိုသင်ကြိုက်ကြောင်းလေ့လာရန် AI ကိုအသုံးပြုသည်။
ပစ္စည်းဒီဇိုင်း - သင်၏ UI အတွက်အရောင်အစီအစဉ်များကိုဖန်တီးမျှဝေပါ။ သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းအတွက်တင်ပို့မှုဖြင့်ပင်လာသည်။
Muzli အရောင်များ - အရောင်အမည် (သို့) ကုဒ်နံပါတ်ထည့်ပြီးလှပသော palette ကိုထုတ်လုပ်ပါ။
Paletton - အခြေခံအရောင်ကိုရွေးချယ်ပြီးမှုတ်သွင်းပါ။
ပို့ရေးဌာန - အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်အရောင်ခြယ်သသည့်တန်ချိန်များစွာဖြင့်လှုံ့ဆော်ခံရသည်။
အမြင်အာရုံချို့တဲ့ခြင်းနှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်သည့်အရောင်ချို့တဲ့ခြင်းများရှိသည့်သင်၏နောက် palette အစီအစဉ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုသတိရပါ။
ခြားနား - လွတ်လပ်သောအရောင်တစ်ခုစီတွင်aရှိသည် တောက်ပ။ အမြင်အာရုံချို့ယွင်းသူများနှင့်၎င်းတို့ကိုခွဲခြားနိုင်စေရန်အလွှာများ၏အရောင်များနှင့်ကပ်လျက်တ္ထုများ၏အရောင် ၄.၅: ၁ ရှိရမည်။ အချိုးအစားကိုသင်တွက်ချက်ရန်ကြိုးစားသည့်အခက်အခဲကိုကျွန်ုပ်ဖြတ်သန်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်အရောင်နှစ်မျိုး၏အချိုးကိုစမ်းသပ်နိုင်သည် အရောင်, contrast အချိုးသို့မဟုတ် Colorsafe.
Iconography - အနီရောင်ဖြင့်ဖြည့်ထားသောလယ်ကွင်းကိုအရောင်ခြယ်ခြင်းသည်အရောင်ချို့တဲ့သူကိုမကူညီပါ။ ပြanနာတခုခုရှိသလားဆိုတာသူတို့သိစေရန်မက်ဆေ့ခ်ျသို့မဟုတ်အိုင်ကွန်တစ်မျိုးမျိုးကိုသေချာစွာအသုံးပြုပါ။
focus - လူတော်တော်များများသည် keyboards (သို့) screenreaders များဖြင့်သွားလာနိုင်သည်။ သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာ၏အားသာချက်ကိုရယူရန်သင်၏သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်ကိုစနစ်တကျဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားကြောင်းသေချာစေပါ။ အမြင်အာရုံချို့တဲ့သူများအတွက်နေရာလွတ်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အပြင်အဆင်အားမဖျက်စီးနိုင်သောနေရာတွင်စာလုံးအရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်လျှော့ချခြင်းသည်အရေးကြီးသည်။
မင်းမျက်စိကျွမ်းကျင်သူလား အရောင်ကျွမ်းကျင်သူလား အသုံးပြုနိုင်စွမ်းကျွမ်းကျင်သူ? ဤဆောင်းပါးတိုးတက်စေရန်ကျွန်ုပ်အားမည်သည့်လမ်းညွှန်ကိုမဆိုအခမဲ့ပေးပါ။
Tags: နာကျင်ခြင်းပိုက်ဆံချည်ထည်ပိတ်အရောင်ကြိမ်နှုန်းအရောင် paletteအရောင် palette အစီအစဉ်များအရောင် paletteအရောင်အစီအစဉ်များအရောင်သီအိုရီအရောင်အဆင်းဖြည့်စွက်ဖြည့်စွက်အရောင်များဝင်းမျက်စိmonochromaticထောင့်မှန်စတုဂံအနီရောင်အပြာအစိမ်းrgbအရိပ်ဖြည့်စွတ်ခွဲစတုရန်းtetradicသစ်ပင်